मान्छे उठ्दा सुत्दा खादा बस्दा घुम्दा सबै कलामय हुनु पर्छ – Info Bazar
मान्छे उठ्दा सुत्दा खादा बस्दा घुम्दा सबै कलामय हुनु पर्छ
March 8, 2020by Info Baazaar0 comments
नगेन आर्ट रेष्टुरेन्ट एण्ड लजको योजना कसरी बन्यो ?
मान्छे उठ्दा सुत्दा खादा बस्दा घुम्दा सबै कलामय हुनु पर्छ । कला मानव भोजन हुनु पर्छ भनेर मैले घोषणा गरेको थिए । जताजतै कलामय बनाउछु भन्ने उद्घोषण साथ ६० सालमा मैले यो अभियान सुरु गरे । त्यस अनुसार मैले विभिन्न क्लवहरु ,ग्यालेरीहरु ,जस्तै नगेन आर्ट ग्यालेरी ,नगेन न्युज अनलाइन खबर ,नगेन टिभी , फाइन आर्ट यातायात संचालन गरे । सबै ठाउमा कला नै कला भए पछी खाने र बस्ने कुरामा किन छुटाउने ? खाजा खाना खादा पनि कलामय हुनु पर्यो भने पछी नगेन आर्ट लज एण्ड रेष्टुरेन्ट पनि खोलीयो । त्यहाँ नगेन आर्ट मो.मो, नगेन आर्ट चाउमिन ,नगेन आर्ट कफी नगेन आर्ट खाना नगेन आर्ट मप्टेल ,नगेन आर्ट कप्टेल इत्यादी ।
“सबै ठाउमा कला नै कला भए पछी खाने र बस्ने कुरामा किन छुटाउने ? “
नगेन आर्ट रेष्टुरेन्ट एण्ड लजको विशेषता के ?
लजमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त कलाकारहरुको देखी लिएर बिधार्थी सम्मको पेंटिंग राखिएको छ। तपाइले जुन कपडा लगाउनु भएको छ मलाई लाग्छ यो सयन्त्रकारी बुनेको जाल हो भन्ने मान्छे म हु। किनकी मान्छेहरु नांगै जन्मिएर आए र नांगै मरेर जान्छ । बोक्राको आविष्कारक पछी पातमा छाप्ने युगको सुरु भयो, पछी सामान्तीहरुले राम्रो कुरा आफुले मात्र हेर्न पाउने , आफुले मात्र मोज गर्न पाउने उनीहरुले धारणा राखी कपडाको बिकास गरे।
सामान्यत अहिले मोबाइलको बिकास पछी हरेक कुराको नग्न हेर्नु परेमा मोबाइलको नै प्रयोग गर्न पर्छ। अब हिरोइन हेर्न पर्न टिकट काट्नु पर्ने । अब त खुलेआम केही पनि हेर्न नपाइने भो त ! प्रकितिक सुन्दर बस्तुहरु सबैले हेर्न पाउनु पर्छ देख्न पाउनु पर्छ र यसलाई कसैले बन्देज गराउनु हुदैन। त्यो पुरानो बेला पनि खुलेआम थियो पछी बन्देज लगाइयो अहिले सम्म बन्देजमा नै छ।
यी डाडा काडा खोला नाला बनजंगललाई कपडा लगाईदिए के हुन्छ ? ल भन्नुन त ! हामी सबै नागिनु पर्छ, त्यो भित्र बाट पनि अनि बाहिर बाट पनि। हामीले सचालन गरेको रेष्टुरेन्ट पनि सिसा नै सिसाले पारदशी रुपमा बनाइएको छ किनकी अहिलेका मानिसहरु डर नै डरमा बाचेका छन।
हामीले यता भित्तामा के गर्दै छौ उताका मानिसहरुलाई थाहा हुदैन। के थाहा की उता पट्टीको मानिसले बम नै बनाएको छ कि ? यसैले हामीले रेष्टुरेन्टमा पारदशी सिसा राखौ। उता र यताका मानिसहरुले के गतिविधी गर्दै छ त नि भनेर एकले अर्कालाई देख्ने भो अनि मानिस हरु ढुक्क हुन्छ नि।र अर्को हाम्रो रेष्टुरेण्टमा जन्मदिन मनाउने व्यक्तिलाई हामी उपहार सम्झना स्वरुप पेन्टिङ पनि उपहार दिन्छौ ।
“यी डाडा काडा खोला नाला बनजंगललाई कपडा लगाईदिए के हुन्छ ? ल भन्नुन त ! हामी सबै नागिनु पर्छ, त्यो भित्र बाट पनि अनि बाहिर बाट पनि। ”
अर्को हामीले नगेन आर्ट लज १५ ओटा कोठाबाट सेवा सुरु गरेका छौ जहाँ हरेक कोठामा कलामय चित्रहरु छन । मानिसहरु खादा,हिड्दा मात्र नभई सुत्दा समेत कलामय हुनुपर्छ ।
तपाइले कोर्ने एरोटिक ल्याण्डस्केप चित्रहरुहरु कस्ता चित्रहरु हुन ?
हामी बाहिरबाट मात्र नभई भित्रै देखी पनि नांगै हुनुपर्छ , पारदशी हुनु पर्छ भन्ने थिममा न्युड चित्रहरु बनाए। ललितकलाको मास्टर डिग्री फाइन आर्ट बिषयको पहिलो बर्षमा यौन जिवनको मुल आधार भन्ने बिषयमा मैले सुरुवात गरेपछी विश्व कला यात्राको घोषणा गरि लुम्बिनी गए । लुम्बिनी मा बिदेशी विज्ञहरु सङ्ग भेट्ने मौका मिल्यो । त्यहाँ मैले न्युड एरोटिकमा चित्र कोरे ! उनीहरुले कहाँको चित्र हो पोखरा कि काठमाडौ कि लुम्बिनी ? आफ्नै बिशेषता अनुसार बनाउनुस भने पछी मैले न्युड एरोटिक तस्विरलाई ल्यान्डस्केपमा बनाए । मैले दुईटै ल्यान्ड स्केप र एरोटिक लाई फ्युजन गरि चित्र कोरे पछी कुनै एउटा अन्तरवार्तामा कस्तो खाले चित्र कोर्नु भयो भन्दा प्वाक मुखबाट एरोटिक ल्याण्डस्केप भनेर फुस्को अनि सबै साथीहरुले नगेनको थिम मिल्यो भनेर चर्चित बनायो । अनि मैले यसैमा मास्टर सके ।
तपाइले भन्ने गरेको डायमण्ड युग नि ?
जय कला क्रान्ति नाम दिएर अवको युग डायमण्ड युग बनाउनु पर्छ । म आफै जिउदो भइन्जेलको बेला नै डायमण्ड युग सुरु गर्छु । जव म ललितकला प्राज्ञ प्रतिस्ठानको सभासद भए पछी मैले चित्रकला सिकाउने गर्थे । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री र प्रम स्व शुशिल कोइराला ज्युलाई पनि चित्रकला सिकाए । भ्याली बाहिर पनि चित्रकला हुनुपर्छ भनेपछी त्यो बेला धेरैठाउमा भनसुन गरेर पोखराको एउटा विधालयमा +२ लेभलमा पनि फाइन आर्ट बिषय सुरुवात गरियो । मैले ३ वर्ष सम्म अध्यन अध्यापन गराए । मेरो अर्को मिसन डायमन्ड युग ल्याउने पनि छ । एउटैमा पनि अल्झेर भएन । अनि डायमन्ड युग ल्याउछु भनेर हिडियो अभियान लिएर । कलाकार राज्यको गहना होइन अङ्ग हो भन्ने कुरा बुज्नु पर्छ । खाना नपाएको देशमा गहनाको के काम भन्दै सबैले कलाकारहरुलाई पन्छाइदिए ।कलाकार राज्यको गहना होइन अङ्ग हुनु पर्छ भनेर मैले यो अभियान सुरुवात गरेको छु ।
” कलाकार राज्यको गहना होइन अङ्ग हो भन्ने कुरा बुज्नु पर्छ । “
ललितकला डायमन्ड युग ल्याउन ९ कुरालाई अभ्यासमा ल्याउ जस्तो कि सरकारी बिधालयमा अनिवार्य ललितकलाको गुरु राखौ,दोस्रो हरेक नगरपालिका गाउपालिकाहरुमा ललितकला सग्रहालय तथा बिभाग बनाऔं तेस्रो हरेक सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य एक कला कृति राखौ चौथो नगरपालिका गाउपालिकाबाट आधुनिक घरको बैठक रुममा अनिवार्य एक कलाकृति राख्ने ठाउँ भए मात्र पास गर्ने ,ललितकला विश्व बिधालय बनाउनु पर्ने ,नेपाल प्रेस काउन्सिलबाट बर्गिकृत क बर्गको पत्रिकाहरुमा अनिवार्य एक पानामा कलाको बारेमा राख्नु पर्ने ,सरकारबाट हरेक वर्ष कलाकृत प्रदशनी गरी उत्कृस्टलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने कलाकारको कला कृतिलाई बैकमा धितोराखी सहज को उपलव्ध गराउने र अन्तिममा नेपालको सबिधानमा ललिताकलालाई अंगको रुपमा उल्लेख गर्न सके डायमण्ड युग सुरु हुन्छ।
विश्व कलायात्रा कहाँ पुग्यो ? अनि चन्द्रमा पुग्ने लक्ष्य नि ?
मैले लुम्बिनी पुगेर विश्व कलायात्रा घोषणा गरेपछी ७७ जिल्ला मध्य ४७ ओटा जिल्लामा पुगेको छु । विश्व कलायात्राको लक्ष्य उदेश्य नै हरेक जिल्ला पुगेर त्यहाका ५ बिशेष घुम्न हेर्न बस्न लाएक ठाउ पुगी पेंटिंग गरेर किताव निकाल्ने योजना हो। नेपालमा घुम्न लाएक हेर्न लाएक ठाउ सगरमाथा , अन्नपुर्ण बेस क्याम्प , मुक्तिनाथ , पशुपती नाथ मात्र हो कि अरु पनि छन त ? यी बाहेक नेपालमा अन्य धेरै स्थानहरु पनि त छन नि घुम्न लाएक।
विश्व कलायात्रामा नेपालका ती हरेक जिल्लाका छनोट भएका ५ स्थान जुन कलाकृत कितावमा राखिएका छन । म विश्व कलायात्राको क्रममा जुन देशमा पुग्छु तेही देशको भाषामा अनुवाद गरी ती किताव बिक्री वितरण गर्ने र नेपालको घुम्न लाएक ठाउहरुको प्रचार प्रसार गरी अन्त्यमा चन्द्रमा पुर्याउने योजना नै हो । अभियान कै क्रममा म आफै दुघटनामा परेपछी अहिले रोकिएको छ तर विश्व कलायात्रालाई फेरी केही समय पछी निरन्तरता दिनेछु ।
This Page Total Views: 2,125
लकडाउन उल्लंघन गर्ने सयौ मानिस पोखरा रंगशालामा थुनिए
कोरोना भाइरसको संक्रमण १० लाख भन्दा बढी मानिसमा,५३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु